DRC oo lagu xiray dad dimoqaraadiyadda u ololeeya - BBC News Somali
DRC oo lagu xiray dad dimoqaraadiyadda u ololeeya
18 Sebtembar 2016
Image caption Lubumbashi, DRC.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 16 qof oo dimoqaraadiyadda u dhaqdhaqaaqa lagu xirxiray Jamhuuriyadda Dimoqaraaddiga ee Kongo. Waxay codsatay in la xushmeeyo xuquuqaha aasaasiga ah iyo xorriyaadka.
Qaramada Midoobay waxay kaloo sheegaysaa in 85 qof lagu xir-xiray magaalada Lubumbashi, ka dib markii ay isku dheceen jimcihii ciidanka amaanka iyo taageerayaasha mucaaradka. Ma jirto jawaab ay dawladdu arrintaas ka bixisay.
Doorashooyin ayaa lagu wadaa inay November dhacaan, laakin guddiga doorashadu waxay sheegayaan in dib loo dhigi doono. Mucaaradka ayaa ku eedeynaya madaxweyne Joseph Kabila inuu codbixinta dib u dhigayo si uu awoodda u sii haysto.